Tijaabadii ugu horreysay ee Shilkii Tareenka ee Ka Dhacay Endorlu wuxuu dhammaaday | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara59 CorluMaxkamad Tacliin ah oo La Xiriiraayo
03 / 07 / 2019 59 Corlu, 59 Tekirdag, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
kiisaska gawaarida tareenka ka hor intaan dhageysiga kowaad la gaarin
Dhageysiga kowaad ee kiiska Chorlu ayaa ku dhammaaday faylka loo direy maxkamada sare, isaga oo ku andacoonaya in lagu amray in lagu soo weeraro kuwa qaraabadooda soo gaadhay.
Tekirdağ, Çorlu 8 July 2018da 7'da 25'si ilmo 340 ayaa geeriyootay, dadka 1 ayaa ku dhaawacmay dhacdadii ugu horreysay ee dhacdada maanta la furay maanta. Waxa lagu arkay Maxkamadda Dambiyada ee Dambiyada.
Maxkamad ayaa go'aansatay in ay ka baxdo faylka ku saabsan eedaymaha horay u soo jeediyay amarka ay bixiyeen wufuudda sababtoo ah amarrada sharci-darrada ah ee ku saabsan weerarrada qaraabada kuwa lumiyay qaraabadooda ka hor dhageysiga. Sida laga soo xigtay war-murtiyeedka Ururka Qareennada Bariga Dhexe, Çorlu 2. Waxaa loo diray Maxkamadda Dambiyada ee Dambiyada.
Ooguz Arda Sel's hooyadiis Moosa Oz Sel ayaa ka maqnaa dhageysiga kadib. Diidmada qoysaska waxay sii socotaa dhinaca hore ee maxkamadda. # Corlutrenkatlia aan pic.twitter.com/ltxnumxbvdjnyq
- Rıfat Dogan (@RifatDogann) July 3, 2019
"Waxay qoysaskoodii ku dhufteen, waxaan qareenno"
Dhammaan kuwa ka lumay qaraabadooda ka hor dhegeysiga iyo kuwa doonaya inay daawadaan dhageysiga ma gali karaan hoolka. Cops albaabka albaabbada qarxiyey qaar ka mid ah qaraabada. Qareenada ayaa soo dhexgalay albaabka si ay u galaan inta soo hartay.
Maxkamad ayaa bilaabatay agagaarka 11.00 saacadba iyada oo aqoonsi.
Qareenada qaraabada eedeysanayaasha ee naftooda ku waayey ka hor aqoonsiga eedaysanayaasha, bayaannada ku saabsan wixii dhacay intii ka horaysay dhegeysiga.
Qareen Lawyer Mürsel Ünder ayaa sheegay, edik Waxaan kuugu sheegnay marar badan in dhageysiga la duubi doono sababtoo ah tirada badan ee dhibanayaasha iyo dabeecada bulshadeed ee faylka. Ma garan karno in hoolka shirku u qoondeeyay qoysaska qaraabadooda ku waayay xasuuqan sida duco. "
Lahaanshaha Waxaad u baahan tahay inaad ogaato, xitaa haddii aysan ahayn awooddaada. Qoysaska ka mid ah kuwii lumiyay ehelkooda ayaa lagu xukumay dambi ahaan bilayska inta lagu guda jiro bisha Maarso. Sababtoo ah waxay doonayaan caddaalad. Waxaan xitaa xitaa geli kari lahayn maxkamada oo qof kastoo geli karo albaabbada birta. Markii aan tagnay albaabka qolka shirarka, qof aan loo aqoon dhageysi aan la furin ayaa isku dayey inuu isku aqoonsado oo isku dayey inuu u galo hoolka. Mar labaad sababo ammaan dartood ...
"Ugu dambayntii, qaar ka mid ah anaga ayaa soo galay, albaabbada qolka ayaa la xidhay ka hor inta aanad furin dhegeysiga oo go'aanka xiritaanka la sameeyay. Adigu waxaad gashay dambiga xaddidaadda xorriyadda.
"Waxay kufsadeen qoysaska bannaanka, waxaan qareenno. Waxaad ma arag. Waxaan u sheegaynaa. Macaamiishayadu waxay kuu sheegi doonaan. Waxaanu hadda ku xareynaynaa dacwad dembi oo adiga iyo xeerilaaliyaha guud oo ku saabsan kuwa mas'uulka ka ah. Tani waa waajibaad.
Qareenka Ünder wuxuu soo gabagabeeyay ereyadiisa isaga oo sheegay in aanu dalbaneyno in macaamiisheenna loo ballanqaado in ay ka dhigaan bayaan ku saabsan kufsiga ay ku dhaawacmeen banaanka.
Qareenka Canal iyo Udir ayaa loo diiday dacwad dembi.
Kaliya codsiga ah in laga saaro booliiska hubaysan ee gudaha qolka maxkamadda ayaa la aqbalay. Boolisyada hubeysan ayaa la soo saaray.
Dhageysiga ka hor, xeer-ilaaliyaha guud wuxuu ku heshiiyay in dacwadda dembiga loo gudbiyo Xafiiska Xeer-ilaaliyaha Guud ee Degmada Çorlu si loogu baahdo saraakiisha codsaday awood aan diidmo ahayn oo ka sarreeya amarka ".
Maxkamad ayaa go'aansatay in ay ka baxdo faylka, iyada oo sheegtay in ay cambaareysay sheegashada in la qabtay iyada oo la adeegsanayo talaabadayada guddiga ee ku saabsan weerarrada ka dhacay dhageysiga ka hor. Maxkamad ayaa la soo gabagabeeyay. Faylka, Çorlu 2 si loogu qiimeeyo go'aanka maxkamadda ee looga baxayo. Waxaa loo diray Maxkamadda Dambiyada ee Dambiyada.
Afar shaqaale TCDD ah ayaa lagu soo oogay ama u keenay dhimasho iyo dhaawac ayadoo loo marayo dayacaad.
# Corlutrenkatlia aan https://t.co/1r6fwIv3aJ
- Qoysaska Carruurta Tacliinta La Qabtay (@TrenKatliami) July 3, 2019
Kuwa ka lumay qaraabadooda iyo qareenadooda ka hor dhagaysiga maanta ayaa la socday iyaga oo u socdaalay Maxkamada Corlu. War saxaafadeed ka soo baxay maxkamadda horteeda, waxay ku yidhaahdeen, "Waxaan weydiisan doonnaa xisaabtan, waxaan halkan u joognaa arrintan."
Aan lagu Xakamaynin Shaqaalaha Xafiisyada iyo Maamulka
Dacwad ooge Galip Yılmaz Özkurşun ayaa baaritaan ku sameeyay sababaha dhimashada iyo dhaawaca ay u geysteen dayac-tirka siyaasiyiinta, saraakiisha, saraakiisha sare ee TCDD iyo tababarayaasha shaqaalaha.
Baaritaanka, taliyaha tareenka Hüseyin Kahraman, darawalku Halil Altinkaya iyo Suat Sahin ayaa la go'aamiyay in aysan maxkamadayn. Xukunka waxaa lagu soo oogay afar ka mid ah shaqaalaha TCDD waxaana go'aan ka gaadhay in aan la xukumin dambiilayaal sare.
Go'aanka aan la xukumin waxaa lagu soo rogay warbixinta soo socota: ına Ma jiro meel lagu soo oogay dacwad oogeenta dadwaynaha sababtoo ah la'aanta caddayn ka dhan ah dhibbanayaasha iyo cabashooyinka ka dhanka ah Halil Altinkaya, Suat Sahin iyo Hussain Kahraman siyaset
Ina Tuhmanayaasha Turgut Kurt, Celalettin Çabuk, Cetin Yildirim iyo Özkan Polat ma lahayn meel ay ku eedeeyaan iyaga oo ka wakiil ah dadweynaha sababtoo ah falalkooda ka dhanka ah dhibanayaasha / cabashooyinka ...... (BİANET)
Qofka la dilay oo la dilay
Kiiska shilalka tareenka in lagu hayo Xarunta Waxbarashada Dadweynaha Educationorlu
Dammiinka dhismaha ka hor inta aan la bilaabin taraamka
Mashruuca nidaamka tareenka Zonguldak-Kozlu ayaa bilowday ka hor
Ururka Qareennada xilliga dhow